Himalaya Dainik » शरीरकाे तौल यसरी घटाउन सकिन्छ, जान्नुहाेस्
अहिले मोटोपनले ‘खानदानी’को होइन, रो’गको संकेत गर्छ । मो’टोपनको अहिले थुपै्र सा’इड इ’फेक्ट देखिएको छ । यसले ज्या’नलाई भ’द्दा देखाउँछ । ज्यान फु’र्तिलो, छ’रितो र चु’स्त हुँदैन । अहिलेको ज’मानामा व्य’क्तित्वको खास महत्व छ ।
यस्तो अवस्थामा भ’द्दा श’रीर आफैमा व्य’क्तित्वको बा’धक हो । यस्तो श’रीरमा न लुगा सुहा’उँछ ? न समग्र श’रीरको बा’न्की मिल्छ । तेस्रो, मो’टो श’रीर हुनु भनेको श’रीरमा अ’तिरिक्त बो’सोको भ’ण्डार हुनु हो । यसले र’क्तनलीहरुलाई थप साँ’घुरो बनाउँछ । मु’टु, क’लेजो, मृ’गौलाको कार्य-संचालनमा अवरोध पुर्‍याउँछ । यसले अनेक किसिमको रो’ग निम्त्याउँछ ।
जस्तो कि, उ’च्च र’क्तचाप, म’धुमेह, को’लोस्टोर आदि । मो’टोपन हुनुको सबैभन्दा ठूलो बे’फाइदा भनेकै संभावित रो’गको भ’य हो । मो’टोपनले रो’गलाई जन्म दिन्छ । अहिले अ’धिकांशलाई यसको हेक्का छ । त्यसैले ज्या’न बढाउने होइन, घ’टाउने चक्करमा लागेको देखिन्छ । अर्थात श’रीरलाई चु’स्त र छ’रितो बनाउने ध्याउन्नमा लागेको देखिन्छ ।
यसका लागि समु’चित तरिका के हो त ?
मो’टोपन घ’टाउने चक्करमा रहेकाहरुले आफ्नो खानामा क’टौती गरिरहेका हुन्छन् । खाना नखाएपछि मो’टो भइदैन । एक हिसाबले कुरा ठिक हो । तर, श’रीरलाई विभिन्न किसिमको पो’षण तत्व आवश्यक हुन्छ । ति पो’षक त’त्वको स्रोत भनेकै खानेकुरा हुन् । यदि खानेकुरा नै नखाने हो भने शरी’रमा पो’षण पुग्दैन ।
त्यसले अर्को रो’ग निम्त्याउँछ । मो’टोपन घ’टाउनका लागि व्यायाम गर्नेहरु पनि छन् । मो’टोपन घ’टाउन मात्र होइन, श’रीरलाई स्व’स्थ्य र त’न्दुरुस्त राख्न व्या’याम अनिवार्य छ । यद्यपी व्या’याम गर्ने भन्दैमा ज’थाभावी व्या’याम गर्नु उचित हुँदैन । आफ्नो श’रीरको अ’वस्था, उमेर आदिलाई ख्याल गरेर उचित किसिमको व्या’याम गर्नुपर्छ । मो’टोपन घ’टाउने चक्करमा कतिपयले औ’षधी सेवन गर्छन् । कतिपय विज्ञापनको पछि लागिरहेका छन् । उ’पचारद्वारा मो’टोपन घ’टाउने भन्दै शहरका गल्ली गल्लीमा क्लि’निकहरु खुलेका छन् । त्यस्तै कतिपय उत्पादन बजारमा ल्याइएको छ । यसले मो’टोपन घ’टाउने होइन, बरु श’रीरलाई थप रो’गको शि’कार बनाउन सक्छ ।
कसरी घ’टाउने त ?
कुनैपनि स’मस्याको निदान खोज्नुअघि त्यसको कारण खोज्नुपर्छ । के कारणले मो’टोपन बढेको हो ? कतिपयको मो’टोपन वं’शानुगत हुन्छ । बाबुबाजे मो’टा छन् भने छो’राछोरीमा त्यसको गुण सर्छ । कतिपयलाई था’इराइड जस्ता रो’गको कारण मो’टोपन बढ्छ । कतिपय औ’षधीको से’वनले पनि मो’टोपन बढ्छ । अहिलेको आम स’मस्या भनेको ग’लत खा’नपान र निस्त्रिmय दिनचर्या हो । विभिन्न किसिमको प्र’शोधित खानेकुरा से’वन गर्ने, शारी’रिक श्रम नगर्ने हाम्रो प्रवृत्ति नै मो’टोपनको कारण बनिरहेको छ ।
. खाना घटाउने होइन । बरु, स्वस्थ्य एवं पोषणयुक्त खानेकुरा सेवन गरौं । ताजा र मौसमी फलफूल, सागसब्जीमा जोड दिनुपर्छ । यस्ता खानेकुराले श’रीरलाई आवश्यक पोषण प्रदान गर्छ । श’रीर स्व’स्थ्य हुन्छ ।
. बजारमा पाइने प्र’शोधित खानेकुरा, जं’कफूड, चिल्लो-चा’प्लो खानेकुराले मो’टोपन बढ्छ । यस्ता खानेकुरा पूर्ण रुपमा त्या’गौं ।
. शा’रीरिक श्रम गरौं । एकै ठाउँमा लामो समय बस्ने नगरौं । केही न केही शा’रीरिक क्रिया गरौं । कार्यलय वा घरमा बस्दा पनि उठ्ने, हिँड्ने गरौं । . विहानको स’मयमा व्या’यामको लागि छुट्याउनुपर्छ । बिहान ३५ मिनेटदेखि ४५ मिनेटसम्म निरन्तर व्यायाम गरौं, हिँडौं ।
. म’दिरापान र त्यससँग गरिने स्न्या’क्सले मोटोपन बढ्छ । यस्ता खानेकुरा त्यागौं ।
. दिनमा एक वा दुई छाक मात्र खाने होइन । दिनभरमा तीन/चार छाक खानेकुरा खाने । तर, हरेक पटकमा थोरै थोरै खाने गरौं । एकै पटकमा धेरै खानेकुरा सेवन गर्दा त्यसले मोटोपन बढाउँछ ।
. सकेसम्म ता’रेको, भु’टेको, म’सलेदार खानेकुरा होइन, उसिनेको खानेकुरा सेवन गरौं । सागसब्जी उ’सिनेको खान सकिन्छ । सागसब्जीको रस से’वन गर्न सकिन्छ । फलफूल वा स’लादको मात्रा बढाउन सकिन्छ । मो’टोपन घ’टाउने प्रभावकारी उपाय हुन् यी ।
. दि’नचर्या सन्तुलित हुनुपर्छ, अनु’शासित हुनुपर्छ । बिहान चाडै उठ्ने, व्या’याम गर्ने गरौं । बेलुकी चाडै सुत्ने गरौं । रा’ती लामो समयसम्म बस्दा भोक लाग्छ ।